नेपालको ईतिहासमै हालसम्मको ठुलो प्राथमिक शेयर (आईपीओ) बिक्री खुला,कति दिने आबेदन ? – Merosamaya
मेरो समय	 Jan 19, 2021 मा प्रकाशित 55 0
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले अहिलेसम्मकै ठूलो आइपीओ शुक्रबार (माघ २ गते) देखि सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गर्दैछ । बैंकले ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ८ करोड कित्ता आइपीओ जारी गर्न लागेको हो । यो नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आइपीओ हो । यसले निष्कासन गर्न लागेको कुल सेयरमध्ये ०.२०% अर्थात १ लाख ६० हजार कित्ता सेयर कर्मचारीहरुका लागि छुट्याइएको छ भने ५% ले हुन आउने ४० लाख कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको छ ।
सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बाँकी ७ करोड ५८ लाख ४० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिने सक्नेछन् । बैंकले प्रतिकित्ता १ सय अंकित मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न लागेको हो । यस आइपीओमा लगानीकर्ताले माघ ६ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस अवधिमा आइपीओ बिक्री नभएमा माघ १६ गतेसम्म बिक्री खुला हुनेछ । लगानीकर्ताहरुले आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । मेरो सेयरमार्फत अनलाइनबाट पनि सेयर भर्न सकिनेछ । यसको बिक्री प्रबन्धक एनआइबीएल एस क्यापिटल हो ।
कति कित्ता भर्ने आइपीओ ?
पछिल्ला दिनहरुमा आइपीओमा अधिक आकर्षण देखिएको छ । दोस्रो बजार बढ्दै जाँदा प्राथमिक बजार (आइपीओ) मा सोही अनुसार सर्वसाधारण उत्साहित बनेका हुन् । यसबाहेक पछिल्ला आइपीओहरु दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएपछि पनि मज्जाले भाउ बढिरहेको छ । सोही कारण पनि धेरैमा आशाको नयाँ सञ्चार देखिएको हो ।
यस कम्पनीको आइपीओमा पनि मोटामोटी १३ लाख जनाले आइपीओ भर्ने अनुमान गर्ने हो भने प्रतिआवेदक करिब ६० कित्ताजति सेयर पर्ने देखिन्छ । यसआधारमा त्यो भन्दा केही बढी आवेदक भए पनि सामान्यतयः ५ हजार वा ५० कित्ताका दरले आवेदन दिएमा सोही अनुपातमा सेयर पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । तथापि, यसमा कति आवेदन पर्छ ? अनि आवेदक संख्या कति हुन्छ अहिल्यै अनुमान गरिहाल्नु त्यति उचित भने हुँदैन ।